Umaka: ingcebo | Martech Zone
Ukugcinwa Kwezindlu NgeDijithali: Ungayithengisa Kanjani Impahla Yakho Ye-Post-COVID Yokubuyiselwa Okufanele
NgoLwesine, Juni 10, 2021 NgoLwesine, Juni 10, 2021 Douglas Karr
Njengoba bekulindelekile, ithuba emakethe ye-post-COVID selishintshile. Futhi kuze kube manje kubonakala kucacile ukuthi kugudluzelwe abanikazi bempahla nabatshalizimali bezezakhiwo. Njengoba isidingo sokuhlala isikhathi esifushane nezindawo zokuhlala eziguquguqukayo siqhubeka nokukhuphuka, noma ngubani onekheli — noma ngabe yikhaya eligcwele lamaholide noma ikamelo lokulala eliseceleni kuphela — usesimweni esihle sokwenza lo mkhuba. Uma kukhulunywa ngesidingo sokuqasha sesikhashana, cishe akunakuphela. Ngaphezu kwalokho, akukho okuhlinzekwayo ku-
Ungayisebenzisa Kanjani Ividiyo Ukumaketha Ibhizinisi Lakho Elincane Lokuthengisa Izakhiwo
NgoLwesithathu, Februwari 17, 2021 NgoLwesithathu, Februwari 17, 2021 UTom Siani
Uyazi ukubaluleka kokumakethwa kwamavidiyo ngobukhona be-inthanethi bebhizinisi lakho lezezakhiwo? Akunandaba ukuthi ungumthengi noma umthengisi, udinga umazisi womkhiqizo othembekile nodumile ukuheha amaklayenti. Ngenxa yalokhu, umncintiswano wokumaketha kwezezakhiwo unolaka kangangokuba awukwazi ukukhulisa kalula ibhizinisi lakho elincane. Ngenhlanhla, ukumaketha kwedijithali kunikeze amabhizinisi abo bonke osayizi ngezinto eziningi eziwusizo ukukhulisa ukuqwashisa ngomkhiqizo. Ukumakethwa kwevidiyo ngu
Amathiphu ayi-10 Wokwakha Iwebhusayithi Ethengisa Izakhiwo Eqhuba Abathengi Nabathengisi Abangahle Bazihlanganise
NgeSonto, uDisemba 13, i-2020 NgeSonto, uDisemba 13, i-2020 Sumiya Sha
Ukuthenga ibhilidi, ikhaya noma i-condo kungukutshalwa kwemali okubalulekile… futhi kuvame ukwenzeka kanye kuphela empilweni. Izinqumo zokuthenga izindlu nezindlu zishukunyiswa yimizwa eminingi ephikisanayo kwesinye isikhathi - ngakho-ke kuningi okudinga ukucatshangelwa lapho kudalwa iwebhusayithi ye-real estate ebasizayo ohambweni lokuthenga. Indima yakho, njenge-ejenti noma umthengisi wezezakhiwo, ukuqonda imizwa ngenkathi uyiqondisa ekuqondeni futhi
I-OneLocal: I-Suite yamathuluzi wokumaketha wamabhizinisi endawo
NgoLwesine, ngo-Okthoba 12, 2017 NgoLwesihlanu, Okthoba 13, 2017 Douglas Karr
I-OneLocal uhlu lwamathuluzi wokumaketha enzelwe amabhizinisi endawo ukuthola ama-walk-ins amaningi, ukuhanjiswa, futhi - ekugcineni - ukukhulisa imali engenayo. Ipulatifomu igxile kunoma yiluphi uhlobo lwenkampani yesevisi yesifunda, ehlanganisa ezemoto, ezempilo, ezempilo, izinsizakalo zasekhaya, umshuwalense, izindlu ezithengiswayo, i-salon, i-spa, noma izimboni zokuthengisa. I-OneLocal inikezela ngohlu lokuheha, ukugcina, nokuphromotha ibhizinisi lakho elincane, ngamathuluzi kuyo yonke ingxenye yohambo lwamakhasimende. Amathuluzi asuselwa efwini e-OneLocal ayasiza